3 Ahụhụ ga-adịrị obodo na-enupụ isi ma na-emerụ onwe ya, bụ́ obodo mmegbu!+ 2 O geghị ntị n’olu ọ bụla;+ ọ naraghị ịdọ aka ná ntị.+ Ọ tụkwasịghị Jehova obi.+ Ọ bịaghị Chineke ya nso.+ 3 Ndị isi nọ n’ime ya bụ ọdụm na-ebigbọ ebigbọ.+ Ndị na-ekpe ikpe na ya bụ anụ ọhịa wolf mgbede ndị na-adịghị atafọ ọkpụkpụ ọ bụla ruo ụtụtụ.+ 4 Ndị amụma ya bụ ndị na-akparị mmadụ, ha bụ ndị aghụghọ.+ Ndị nchụàjà ya merụrụ ihe dị nsọ; ha mebiri iwu.+ 5 Jehova bụ onye ezi omume n’ime ya;+ ọ dịghị eme ajọ omume ọ bụla.+ Ọ na-eme ka a mara ihe o kpere n’ikpe kwa ụtụtụ.+ Ọ kọghị ụkọ mgbe chi bọrọ.+ Ma ihere adịghị eme onye ajọ omume.+ 6 “M bipụrụ mba dị iche iche; m mekwara ka ụlọ nche ndị dị na nkuku mgbidi ha tọgbọrọ n’efu. M lara okporo ámá ha n’iyi, nke mere na o nweghị onye na-esi na ya agafe. E mere ka obodo ha bụrụ mkpọmkpọ ebe, nke mere na mmadụ afọdụghị, ọ dịghịkwa onye bi na ha.+ 7 M sịrị, ‘Ị ghaghị ịtụ egwu m; ị ga-anara ịdọ aka ná ntị’;+ ka e wee ghara ibipụ ebe obibi ya+—m ga-eme ka ọ zaa ajụjụ ihe ahụ niile.+ N’ezie, ọ na-enu ha enu n’obi ime ihe ọjọọ.+ 8 “‘N’ihi ya, cherenụ m,’+ ka Jehova kwuru, ‘ruo ụbọchị m ga-ebili ịkwakọrọ ihe,+ n’ihi na mkpebi m bụ ịchịkọta mba+ dị iche iche, ịchịkọta alaeze dị iche iche, iji wụkwasị ha ọnụma m,+ bụ́ oké iwe m niile; n’ihi na ọkụ nke ekworo m ga-eripịa ụwa dum.+ 9 N’ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka m ga-agbanwe asụsụ nke ndị dị iche iche ka ọ bụrụ asụsụ dị ọcha,+ ka ha niile wee na-akpọku aha Jehova,+ ka ha wee jiri otu obi na-efe ya ofufe.’+ 10 “Ndị na-arịọsi m arịrịọ ike, ya bụ, ndị m a chụsara achụsa, ga-esite n’ógbè osimiri Itiopia wetara m onyinye.+ 11 N’ụbọchị ahụ, ihere agaghị eme gị n’ihi mmehie niile i mere megide m,+ n’ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka m ga-ewepụ ndị gị dị mpako n’etiti gị;+ ị gakwaghị adị mpako n’ugwu nsọ m.+ 12 M ga-ahapụkwa ndị dị umeala n’obi na ndị dị nwayọọ n’etiti gị,+ ha ga-agbabakwa n’aha Jehova.+ 13 Ma ndị fọdụrụ n’Izrel+ agaghị eme ajọ omume,+ ha agaghịkwa agha ụgha,+ ha agaghịkwa enwe ire aghụghọ;+ n’ihi na ha onwe ha ga-eriju afọ ma dinara ala,+ ọ dịghịkwa onye ga-eme ka ha maa jijiji.”+ 14 Tie mkpu ọṅụ, gị ada bụ́ Zayọn! Tie mkpu obi ụtọ,+ Izrel! Jirikwa obi gị dum ṅụrịa ọṅụ ma nwee obi ụtọ, gị ada bụ́ Jeruselem!+ 15 Jehova akagbuwo ikpe a mara gị.+ Ọ chụpụwo ndị iro gị.+ Eze Izrel, bụ́ Jehova, nọ n’etiti gị.+ Ị gakwaghị atụ ihe ọjọọ egwu.+ 16 N’ụbọchị ahụ, a ga-asị Jeruselem: “Zayọn, atụla egwu.+ Enwela nkụda aka.+ 17 Jehova bụ́ Chineke gị nọ n’etiti gị. Dị ka Dike, ọ ga-azọpụta gị.+ Ọ ga-enwe aṅụrị n’ihi gị.+ Ịhụnanya o gosiri gị ga-eme ka o nwee afọ ojuju. Ọ ga-enwe obi ụtọ na aṅụrị n’ebe ị nọ. 18 “M ga-achịkọta+ ndị na-eru uju+ bụ́ ndị na-anọghị n’oge ememme gị; ha anọghị n’etiti gị n’ihi na ha bụ ndị a na-akọcha n’ihi ya.+ 19 Lee, n’oge ahụ, m ga-eme ihe megide ndị niile na-emekpa gị ahụ́;+ m ga-azọpụta onye na-ete ụkwụ,+ m ga-achịkọtakwa ndị a chụsara achụsa.+ M ga-emekwa ka ha nwee otuto na aha n’ala dum e mere ha ihe ihere. 20 N’oge ahụ, m ga-akpọbata unu, ọbụna n’oge m ga-achịkọta unu. N’ihi na m ga-eme ka unu nwee aha na otuto n’etiti ndị niile nọ n’ụwa, mgbe m ga-achịkọtaghachi ndị unu a dọọrọ n’agha n’ihu unu,” ka Jehova kwuru.+